Chiang Mai –Chiang Rai Overnight, Thailand Tour - Myanmar Interlink Services Co.,Ltd.
Hot Line: (+95 1) 537 061 (+95 1) 703 493 (+95 9) 511 9421 (+95 9) 862 8466
We Shall Develop Through Customers' Satisfaction!
Chiang Mai –Chiang Rai Overnight, Thailand Tour
Tour Price: Tour only Package deal =US$300 per person for 16 pax group (twin-sharing room at 4+ Star Hotel) High Season price offer is valid until 31st May 2019 Tour Type: MIS/OT/DNG-0403-CNXCEIOP1/18/th (Outbound) Tour Duration:4Days3Nights
Visit Doi Suthep Temple one of the most important Buddhist temples of Thailand
Visit the lost city of Wieng kumkam which was discovered in the thick brush of Chiang Mai with its ancient five-level chedi (or Buddhist pagoda) of Mon style
Taste Chiang Mai traditional Dinner & take pleasure in Fantastic cultural show
Enjoy Elephant riding and shows
Visit the famous Golden Triangle and Opium House
Visit Wat Rongkhun (White Temple) and see for yourself the reflections of Buddhist teachings that show the way to escape from the worldly temptations, desires and greed and focus on the mind instead
Day 1: Chiang Mai arrival– CHIANG MAI CITY TOUR
Day 2: CHIANG MAI – ELEPHANT CAMP – HILL TRIBE VILLAGE _ CHIANG RAI
Day 3: CHIANG MAI – CHIANG RAI , DINNER KHUM KHANTOK
Day 4: Continue Chiang Mai sightseeing before departure to Yangon
Yangon – Chiang Mai – Yangon
Wed; Fri; Sun
* Tour guide :English Speaking Guide during the tour in CHIANG MAI & CHIANG RAI
*Daily ABF at hotel and meals as mentioned in the program,
* Shows and Sightseeing in schedule,1 bottle of drinking water for each pax per day.
* Transportation by Air–conditioner during the tour :Van 10 seats for group 02–09 adults, 10 –16 Pax use Mini Bus 20 seats, 17 –30 Pax use coach 40 seats ( .if your grp consist of 35–40 Pax takes same flight and stay at same hotel we will arrange 1 coach +1 Guide only .)
*Tourist Accident insurance :
-> Scope of cover :Against accident to cover all registered tourist during the sightseeing tour, Riding as passengers on car, boat or other activities including playing all kind of sports for pleasure which are organized by our Travel Partner Donna Group Co., Ltd.
->Limited of Liability:
1 .THB 1,000,000 .- per tourist against accidental death.
2 .THB 1,000,000 .- per tourist against accidental dismemberment & Loss of Sight
3 .THB 500,000 .- per tourist per accident for reimbursement of accident medical expenses.
-> Other terms, conditions and exclusion subject to the original Policy.
*All air tickets and International airport tax .Hotel surcharge in high season, Thai Water Festival, Gala Dinner on X’Mas (24, 25 Dec 17 ) & New Year 31 Dec 16, Chinese New Year 2017 .
*Optional Tours, Personal expenses; Tel, Fax, Mini Bar, Laundry, Tip for driver & local guide, Tourist insurance .
*Tipping for Local tour guide & Driver in Chiang Mai & Chiang Rai COMPULSORY TIPS
 For group5pax up tipping (3 USD /pax /day tour)
 For group2–4pax tipping (5 USD /pax /day tour)
**ကြယ်သုံးပွင့်ဟိုတယ်၌ အိပ်ခန်းတစ်ခန်းကို နှစ်ဦး သို.မဟုတ် သုံးဦး မျှနေထိုင်သည့်စနစ်ဖြင့် နံနက်စာပါပါဝင်ပြီး ၃ ညအိပ် တည်းခိုနိုင်ခြင်း၊
**ခရီးစဉ်တလျှောက် Air-Con ယာဉ်ဖြင့် ပို.ဆောင်ပေးခြင်း၊
**ခရီးစဉ်တွင်ဖေါ်ပြထားသော နံနက်စာ၊ နေ.လည်စာ နှင့် ညစာများ၊
**ခရီးသည်တစ်ဦးအတွက် တစ်ရက်လျှင် ရေသန်.တစ်ဘူး၊
** Hotel surcharge during Thai Water Festival 2018(Songkran), Gala Dinner on X’Mas (24, 25 Dec 17 ) & New Year 31 Dec 17, Chinese New Year 2018
**ခရီးစဉ်တွင်ဖေါ်ပြထားခြင်းမရှိသော အပိုလည်ပတ်မှုနှင့်ဝင်ကြေးများ၊ **ခရီးစဉ်တွင်ဖေါ်ပြထားခြင်းမရှိသောအစားအစာနှင့်အချိုရည်၊ ဖျော်ရည်မကာအားလုံး၊
**ကိုယ်ပိုင် အသုံးစရိတ်အားလုံး၊ ဟိုတယ်အခန်းတွင်အသုံးပြုသော အ၀တ်လျှော်ခ၊ ဖုန်းပြောခ၊ Mini-bar ပစ္စည်းအပါအ၀င် အခြားသော အပိုအသုံးစရိတ်များ၊
**လေဆိပ်နှင့်ဟိုတယ်တွင် ပေးဆောင်ရသော Tip money၊
**Tip for guide and driver is
For group5pax up tipping (3 USD /pax /day tour)
For group2–4pax tipping (5 USD /pax /day tour)
Day 1: Chiang Mai arrival (Dinner)
MNA arrival at Chiang Mai airport at 17:20 pm.
Warmly welcome by our local guide
19:00 pm Dinner at local restaurant.
Check in at hotel, visit Chiang Mai night bazaar, overnight in Chiang Mai.
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်သော ချင်းမိုင်မြို့၏ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ လာရောက် ကြိုဆို ပါမည်။ ပြီးနောက် ညစာကို စားသောက်ဆိုင်၌ သုံးဆောင်ပြီး ဟိုတယ်တွင် check-in လုပ်၍ ချင်းမိုင်မြို့ ညဈေးသို.လည်ပတ်မည်။ ချင်းမိုင်မြို့၌အနားယူ အိပ်စက်ပါမည်။
Day 2: Chiang Mai sightseeing and transfer to Chiang Rai (Breakfast/Lunch/Dinner)
07:00 am Breakfast at hotel.
08:00 am Leave the hotel for visit Mae-Sa Elephant Camp, and enjoy the elephant show off their many skills with work demonstrations, playing football and even painting.
11:00 am Visit Baan Tong Luang Hill Tribe Village Learn the lifestyle of hill tribe people such as Lahu, Padong , Palong (the Long Neck Karen), Yao, Akha, Kayaw, Mhong and White Karen. You will be amazed with their native talents including daily farm work.
12:30 pm Visit Orchid and Butterfly farm enjoy exotic butterfly and many kind of orchid
16:00 pm Proceed to Chiangrai , stop at Hot Spring , continues to Chiangrai. Lunch at local Rest before check in hotel. Free for shopping at Chiangmai, Night Bazzar. Dinner and O/N in Chiangrai.
ဟိုတယ်၌ နံနက်စာ သုံးဆောင်ပြီး ချင်းမိုင်မြို့ရှိ ဆင်စခန်းသို. ဆင်လိမ္မာများ၏ဘောလုံးကန် ကစားခြင်း၊ ပန်းချီဆွဲခြင်း၊ အစရှိသည့်စွမ်းရည်သရုပ်ပြပွဲများ ကြည့်ရှု ရန် သွားရောက်ကြမည်။ ထို.နောက် လာဟု၊ ပဒေါင်၊ ပအို.(လယ်ပင်းရှည် ကရင်)၊ အခါ၊ ကရား၊ မြှောင်စသည့် တောင်ပေါ်လူမျိးပေါင်းစုံ တို.၏ နေထိုင်မှုဘ၀ လေ့လာနိုင်ရန် Baan Tong Luang ရွာသို.၎င်း၊ ကျောက်မျက်ရတနာ၊ ပျားရည်၊ သားရေ၊ နှင့် ထိုင်း ပိုးထည် စသည့် ဒေသထွက်ကုန်အိမ်တွင်းစက်မှုလုပ်ငန်း များ သို.၎င်း၊ သွားရောက် ကြည့်ရှု လေ့လာ ကြမည်။ ထိုနောက် သစ်ခွပန်းမျိုးစုံနှင့်လိပ်ပြာမွေးမြူရေးခြံသို. သွားရောက် လေ့လာမည်။ထိုမှချင်းရိုင်မြို.သို.ခရီးဆက်၍ လမ်းခရီး၌ ရေပူစမ်းတွင်အနားယူမည်။ပြီးလျှင် ချင်းရိုင် သို.ရောက်သည့်အခါ စားသောက်ဆိုင် တွင် ညစာ သုံးဆောင်၍ ဟိုတယ်၌ Check-in လုပ်မည်။ ချင်းမိုင် ညဈေးတွင် ဈေးဝယ်ရန် ကိုယ်ပိုင်အချိန်ပေးထားပါသည်။ ချင်းရိုင်းမြို.၌ ညအိပ်ပါမည်။
Day 3: Chiang Rai sightseeing and return to Chiang Mai (Breakfast/Lunch/Dinner)
06:30 am Breakfast at hotel.
07:30 am Visit Golden Triangle at the intersection of the three countries Laos, Myanmar and Thailand meet in the middle of the Mekhong River, Boat Trip along Mekhong River for sightseeing by long tail boat.
11:30 am Lunch at local Rest.
14:00 pm Back to Chiang Mai,
15:00 pm visit Wat Rong Khun (White Temple) if before 17:00 PM.
Enjoy Khantok dinneratraditional of Lanna. This north Thailand dinner with music and dance.
ဟိုတယ်၌ နံနက်စာ သုံးဆောင်ပြီး ချင်းရိုင်မြို့ခေါ်လာအို၊ မြန်မာနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ရွှေတြိဂံ နယ်မြေသို့သွားရောက်၍ ရှုခင်းများကို ကြည့်ရှု ခံစားပါမည်။ မယ်ခေါင်မြစ်လျှောက် လှေဖြင့် လည်ပတ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
နေ့လည်စာကို စားသောက်ဆိုင်တွင် သုံးဆောင်ပြီး နောက် ချင်းရိုင်မြို့ရှိ Wat Rongkhun (White Temple) သို့လည်း သွားရောက် လည်ပတ်ပါမည်။ ပြီးနောက် ချင်းမိုင်မြို့သို. ညနေပိုင်းတွင် ပြန်ရောက်၍ ညစာကို ချင်းမိုင်မြို့၏ Khan Toke ရိုးရာအစား အသောက်ဖြင့် သုံးဆောင်ရင်း ထိုင်းရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အက ပဒေသာ ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှုများကို ကြည့်ရှု ခံစားပြီးနောက် ဟိုတယ်တွင် အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။
Day 4: Continue Chiang Mai sightseeing before departure to Yangon (Breakfast/Lunch)
06:30 am Breakfast at hotel. Check out. Transfer to visit Doi Suthep is the most important temple in Chiang Mai. The view of Chiang Mai from here is just phenomenal as well.
Lunch at Khao Mao Khao Phang , Wieng kumkam with tram4FACE Buddha.
Free for shopping at Central Plazar near Airport for shopping.
Transfer to Chiang Mai Airport for flight back to your sweet home by MNA at 18:45pm
ဟိုတယ်၌ နံနက်စာ သုံးဆောင်ပြီး check-out လုပ်ပါ မည်။ ချင်းမိုင်မြို့၏ အထင်ရှားဆုံးနှင့်တန်ခိုးကြီးဘုရား များ အနက်တစ်ခု အပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး တောင်ပေါ် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား ဖြစ်သော Doi Suthep Pagoda သို့ သွားရောက် ဖူးမြော်ပါမည်။ ချင်းမိုင်မြို့၏ ခမ်းနား ထည်ဝါသော တော်ဝင်ပန်းခြံ သို.၎င်း လေ့လာကြည့်ရှု နိုင်ရန် ပို.ဆောင်ပေးပါမည်။ နေ့လည်စာကို Khao Mao Khao Phang တွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက် ချင်းမိုင်မြို့၏ တောချုံကြား၊ ရွှန်.နွံ မြေအောက် ထဲတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖုန်းလွှမ်း ပျောက်ကွယ်နေပြီး ပြန်လည် တူးဖေါ်တွေ.ရှိခဲ့သည့် ရှေးဟောင်းမြို.တော်သို.၎င်း၊ လေးမြတ်နှာဘုရားသို.၎င်း၊ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ရန် ပို.ဆောင်ပေးပါမည်။ ထို.နောက်ရန်ကုန်မြို.သို့ပြန်လည် ထွက်ခွာနိုင်ရန် ချင်းမိုင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ပို.ဆောင်ပေးပါမည်။
Package Price Detail
Tour only Package deal =US$300 per person for 16 pax group (twin-sharing room at 4+ Star Hotel) High Season price offer is valid until 31st May 2019
Prices net per Person in US Dollar, based on
Twin & Triple sharing room.
(CONDITION 16 PAYING ADULTS +1 FOC.) SGL SUP
2-3 pax 4-6 pax 7-9 pax 10-14 pax
No FOC 15-19 pax 20-24 pax 25-29 pax 30 +2FOC=32pax up
TOUR FARE 1 : 4* LOCAL (1)
Hotel in CNX:
Duang Tawan Hotel, Imperial Mae Ping or similar.
Hotel in CEI :
Wiang Inn Hotel, Grand Vista Chiangrai or similar
http://www.grandvistachiangrai.com/ 715 485 380 320 310 285 275 270 85
TOUR FARE2: 4* LOCAL (2)
Chiangmai Grand View, Khum Phucome or similar.
http://www.grandvistachiangrai.com/ 705 450 370 310 300 275 265 260 75
36H, Golden Valley Road, Golden Valley Ward 2, Bahan Township Yangon,Myanmar.
(+95 1) 537 061, (+95 1) 703 493, (+95 9) 511 9421, (+95 9) 862 8466 Fax: 95-1-537061
“I would very much like to express my gratitude for the completeness of services provided duringavisit to the peaceful and most beautiful flower city eve…
Thank you for your great service and for putting up with my last min requests! My parents and the whole family hadagreat time! Pleasant View Hotel offers…
Very efficient and reliable tour company that you can trust and get wonderful services.
Thank you “Myanmar Interlink Services Travel & Tours” We hadagreat time in Ngwe Saung, and were very happy.. Your service is excellent .. Thanks you ag…
ဆရာဦးထွဋ်အောင်ကြည်၏ Myanmar Interlink Services Travel & Tours မှစီစဉ်ပေးမှု့ကြောင့် မိသားစုသြ…
I and my sister went to Gaya and Delhi7nights/ 8 days private tour. The trip was planned well, comfortable and enjoyable. The guide was English speaking …
Great personalized service with our package Manager calling us daily to check if everything is satisfactory. Will use your service again for future travels…
ယုံကြည်စိတ်ချရ သော၊ ခရီးစဉ်တလျှောက်လုံး စိတ်ချမ်းသာအောင် စီစဉ်ပေးနိုင်သော Travel Agent ကျွန်တော်တို့ မိသားစ…
Thank you for your great service and for putting up with my last min requests! My parents and the whole family hadagreat time! Pleasant View Hotel of…
Passenger Sales Agent of
Myanmar Interlink Services Travel & Tour @2021.Developed by Digital Dots